आज राजा विरेन्द्रको ७६ औँ जन्म तिथी, उनका केही दुर्लव तस्विरहरु - DURBAR TIMES
HomeHistoryआज राजा विरेन्द्रको ७६ औँ जन्म तिथी, उनका केही दुर्लव तस्विरहरु
आज राजा विरेन्द्रको ७६ औँ जन्म तिथी, उनका केही दुर्लव तस्विरहरु
स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र शाहको आज ७६ औं जन्म दिवस परेको छ । देशले बिर्सन नसक्ने व्यक्तित्वको रुपमा पर्ने राजा वीरेन्द्र शाहको मृत्‍यु नेपाली मन मस्तिस्कमा एक दुकद: घडीको रूपमा सदा रहिरहकोछ।
२०५८ जेठ १९ गते राती दरबारभित्रै राजारानीसहित राजपरिवारका सदस्य र आफन्तको हत्या भएको थियो । उच्च सुरक्षा घेराभित्र रहेको दरबारमा भएको हत्याकान्ड अहिले पनि रहस्यकै गर्भमा रहेको छ ।
राजतन्त्र हटेर मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भइसके पनि तत्कालीन राजा विरेन्द्रलाई एक असल नेता, राष्ट्राध्यक्षको रूपमा लिने लिने गरिन्छ। किन लोकप्रिय थिए त राजा विरेन्द्र ?
किन लोकप्रिय थिए उनी ?
वि.स. २०२८ सालमा राजा महेन्द्रको निधन पछि राजा बनेका वीरेन्द्रले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।
राजा वीरेन्द्र विदेशी कुटनीतिप्रति सँधै चनाखो थिए । भारतले राजा वीरेन्द्रलाई नेपालको विदेश नीति आफुलाई सुम्पिए पञ्चायत बचाउने प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरि नेपाली जनतालाई देश सुम्पिदै नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था लागु गराई आफु संवैधानिक राजा बनेका थिए । उनले दलहरुमाथि लागेको प्रतिवन्ध फुकुवा गरे । जनता र दलका नेताहरुप्रति घुलमिल हुने राजाका रुपमा वीरेन्द्रलाई सम्झने गरिन्छ । त्यसैले पनि राजा वीरेन्द्र जनतामाझ झन लोकप्रिय बने ।
राजा र साम्यवादी सत्तावीचको सहकार्य सामान्यतः अकल्पनीय रहे पनि नेपाली परिवशेमा त्यो अपवादको दुर्लभ ऐतिहासिक संयोगान्त यथार्थ थियो । यसको सीधा र सरल कारण थियो, राजा वीरेन्द्र यति उदार थिए कि आलोचकहरुलाई पनि आफ्नो प्रशंसक बनाउन सक्थे । जीवनभर राजाविरोधी आन्दोलन लडेका शिखर वाम पुरुष मनमोहनको पनि मन जित्ने क्षमता उनै राजा वीरेन्द्रमा थियो ।
मदन भण्डारी तिनै एक ज्यूँदा वाम नेता थिए, जसले राजा वीरेन्द्रलाई श्रीपेच खोलेर चुनावमा आउन हाकाहाकी चुनौति दिएका थिए । तर, तिनै भण्डारी पटक९पटक राजालाई भेटेर फर्केपछि राजाका प्रशंसक बनेका थिए । उनले पार्टीको राजाविरोधी नीतिमा अल्पविराम राजा वीरेन्द्रको संगतपछि नै लगाउन थालेका थिए । यसको पनि कारण उही हो, वीरेन्द्र असल राजाको छविले नै आलोचकहरुको मन जितेर विश्वासिला बनिदिने खुबीका राजा थिए ।
कांग्रेस र वाम मोर्चा नेतृत्वको ०४६ साले संयुक्त जनआन्दोलनमा खास ठूलो जनधनको क्षतिबिनै प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनाको घोषणा उनै राजा वीरेन्द्रले गरिदिए, जब कि त्यति छिटो र सहजै प्रजातन्त्र पुर्नस्थापित भैहाल्ने वा पञ्चायत बिदा भैहाल्नेमा तत्कालीन आन्दोलनकारी दलहरुमा नै विश्वास थिएन । यसले राजा वीरेन्द्रको लोकसम्मतिका आधारमा चल्ने शाहवंशीय परम्पराको निरन्तरताप्रतिको झुकावलाई दर्शाएको थियो ।
परिवर्तनका लागि जनता मर्नु हुन्न भन्ने वीरेन्द्र दृष्टिकै उपज थियो, थोरै क्षतिको त्यो धेरै राजनीतिक उपलव्धि, जसले उनको जनताप्रेमी धारणालाई व्यवहारमै उतारेको थियो । ०३६ को जनमत संग्रह होस् वा ०४६ को बहुदल घोषणा, ती वीरेन्द्रका प्रजातान्त्रिक निष्ठाका नमूना थिए ।
पञ्चायतको पतनपछि पुनर्स्थापित प्रजातन्त्रकालीन नेपालमा जति राजा बन्न पाए, त्यतिन्जेल व्यवस्था र संविधानका सीमा नाघ्ने प्रयाश कहिल्यै गरेन्न उनले ।
विवादास्पद नागरिकता विधेयक संसदलाई फिर्त्ता गरिदिएर होस् वा संवैधानिक जटिलताका मुद्दा अदालततिर पठाइदिएर होस् प्रजातान्त्रिक छविमा कहिल्यै धुमिलपना आउन दिएनन् ।
सामान्यतः व्यवस्था परिवर्तनपछि आउने संक्रमण र सत्ताशक्ति संर्घषका अभ्यासमा विवादभन्दा माथि र अलग्गै रहे राजा वीरेन्द्र ।
भूराजनीतिलाई बुझेका राजा वीरेन्द्रले दक्षिण र उत्तरको छिमेकीसंगको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्नु पर्ने बताउँने गर्थे । भारतको कुदृष्टि र पश्चिमाहरुको नेपाल नीतिलाई प्रष्ट बुझेका उनले नेपालको सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि नेपाललाई शान्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने अभियान चलाए । यो अभिनलाई धेरै देशले स्वीकारे पनि भारतले भने यो अभियानको खुलेरै विरोध गरेको थियो ।
शान्तीवादी छवी बनाएका उनको मृत्यु भने रहस्यमयी बनेको छ । आजसम्म पनि राजपरिवारको हत्यारा पत्ता लगाउन सकिएको छैन ।
यदी दरबार हत्याकाण्ड नभएको भए नेपालमा यति छिट्टै राजतन्त्र समाप्त नहुने विश्लेषण अहिले पनि गरिन्छ ।
आज नेपालको राजसंस्थाको अन्त्य भईसक्दा पनि राजा वीरेन्द्रको योगदानलाई कहिल्यै विर्सनै सकिन्न । आज भन्दा झण्डै १९ वर्ष अघि हामीले एउटा अमुल्य रत्नलाई गुमाउन पुग्यौं । यो एउटा अपुरणीय क्षति हो नेपाली जनताका लागि ।
उनले नेपालको धर्म परम्परा र चाडपर्वलाई संधै संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने काम गरे । त्यसैले त उनी आज पनि हामी नेपालीको मन मस्तिष्कमा अमर रहेका छन् ।
Previous articleआर्या राजेन्द्रन : भारतकी कान्छी मेयर
Next articleआज(मंगलबार) ह्वात्तै घट्यो सुनको मुल्य